မေတ္တာတရားကိုသာ မက်မောခဲ့တာပါ – Hlataw.com
ခြူးနဒီ .. ကန်တော့ .. ကန်တော့ .. ရဲနိုင် လက်ထဲဆွဲလာသည့် ကြေးအိုးထုပ်က အပေါက်ဝနားတွင် ရပ်နေမိသေးသူ ခြူးနဒီ ပေါင်တစ်ဖက်နှင့် ၀င်တိုက်သည်။ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်၏ ထိပ်ဝကို စုကာချည်ထားပေးမယ် တိုက်မိသည့် အရှိန်နှင့် အရည်တစ်ချို့က လျှံကျကာ ဂါဝန်ကို စိုသွားသည်။ အကွက်ကလေး ဖြစ်သွားသော ထိုနေရာသည် တကယ့်နေရာ။ ရဲနိုင် မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးဖြစ်ပြီး နှုတ်က ယောင်ယမ်း၍ ကဗျာကယာ တောင်းပန်မိသည်။ ပူများ ပူသွားပြန်ပြီလား …။ ခြူးနဒီ မျက်နှာကို စေ့စေ့တောင် မကြည့်ရဲတော့။ တကိုယ်လုံးလည်း ထူပူတက်လာသည်။ မဖြစ်တော့ … ကြေးအိုးထုပ်ကို ပေးပြီး ပြန်မှ ဖြစ်တော့မည် …။ “ရတယ် ဆရာ .. ကြေးအိုးထုပ်သာ ခြူးနဒီကို အရင်ပေးလိုက်တော့ .. ဧည့်ခန်းမှာ ခနထိုင်နှင့်ဦး .. ခြူးနဒီ မီးဖိုချောင်ထဲ သွားထားလိုက်မယ် ..“ “နေ .. နေပါစေ .. မထိုင်တော့ဘူး .. “ ဒါက ဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲ ဆရာ .. ခြူးနဒီပေါ် ကြေးအိုးရည် မှောက်ကျအောင်လုပ်ပြီး ပြန်သွားတော့ မလို့လား …။
မ … မဟုတ်ဘူး ခြူးနဒီ .. ကိုယ် ဒီလို ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘူး ..“ဒါဆိုလဲ အထဲဝင်ပါ ဆရာ .. ခြူးနဒီ ဆရာ့ကို မေးစရာ ရှိသေးတယ် ..“ မတတ်သာတော့။ ခြူးနဒီလက်ထဲ ကြေးအိုးထုပ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ရပြီး လူက ဧည့်ခန်းရှိရာသို့ လျှောက်သွားလိုက်သည်။ ခြူးနဒီက ရဲနိုင်၏ နောက်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရခဲ့သည့် အပြုံးကို ပြုံးသည်။ ထို့နောက် အိမ်တံခါးကို သံပန်းရော၊ အတွင်းတံခါးပါ သေချာပြန်ပိတ်သည်။ ခြူးနဒီ လုပ်နေကိုင်နေပုံကို ဆက်တီခုံပေါ်မှာ ၀င်ထိုင်ရင်း မြင်လိုက်ရသဖြင့် ရဲနိုင် စိတ်ထဲ သရိုးသရီဖြစ်လာသည်။ အထူးသဖြင့် တိတ်ဆိတ်နေသည့် အိမ်၏ အခြေအနေကို မကြိုက် .. ။ သူနှင့် ခြူးနဒီ နှစ်ယောက်ထဲများလား .. ။ “အိမ်မှာ ဘယ်သူတွေ မှ မရှိဘူးလား .. ခြူးနဒီ …“ “မရှိဘူး ဆရာ .. ဘုရားကိုးဆူ ဖိတ်လို့ သွားကြတယ် …“ နောက်ဘေးဘက် ၀င်သွားသည့် ခြူးနဒီထံမှ ပြန်အော်ဖြေသံကို ကြားရသည်။ သူတွေးထားသည့် အကြောင်းကို confirm လုပ်သည့် အဖြေမို့ ရဲနိုင် ထိုင်ရာမှ အလိုလို ထရပ်မိသည်။
ခြူးနဒီကို ချောင်းသာသွားမည့်ကိစ္စ ပြောပြီး ပြန်မှ ဖြစ်တော့မည်။ ခြူးနဒီကို မယုံရဲသလို၊ သူ့ကိုယ်သူကိုလဲ မယုံရဲ။ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်နှင့် နှစ်ယောက်ထဲနေရဖို့ဆိုသော အခွင့်အရေးကို တခြားသူများသာ လိုချင်လျှင် လိုချင်ကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ရဲနိုင်အတွက်တော့ ဒီအချက်က မမှန် ။ “မတ်တပ်ကြီး ရပ်လို့ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာ …“ “ဘာ … ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး .. ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုရင် ပြန်တော့မလို့ …“ “အဲဒါက ဘာစကားလဲ ဆရာ .. ခြူးနဒီ ဆရာ့ကို ဘာလုပနြလေို့လဲ ..“ “မ .. မဟုတ်ဘူး .. ခြူးနဒီ .. ဆောရီးကွာ .. ဆရာ့စိတ်တွေ တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ … ဆရာ ပြန်တော့မယ် ..“ “ဒီမှာ ဆရာ ..“ ခြူးနဒီက သူ့ဘေးက လွတ်နေသည့် ဆက်တီခုံတွင် ၀င်ထိုင်ရင်း မျက်ဝန်းတွေကို ၀င့်ကာခေါ်သည်။ ရဲနိုင် အ၀တ်အစားမလဲပဲ ပြန်ထွက်လာသည့် ခြူးနဒီကို သေချာမကြည့်ရဲ။ အထူးသဖြင့် ဂါဝန်ကို အခုအခံမပါပဲ ၀တ်ထားသည်ဆိုတာကို ရှေ့ရော၊ နောက်ရောကပါ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်မို့ ပိုဆိုးသည်။
မုန်ယိုစပြုချင်ချင်ဖြစ်နေသာ စိတ်ဆင်ရိုင်းကို အတင်းတားထားရသည်။ သူ့အကြည့်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ခင်းထားသည့် ဖယောင်းပုဆိုးကွက်ဆီသို့သာ ရွှေ့ထားရသည်။ မတည်ငြိမ်သည့် စိတ်ကြောင့် ဖယောင်းပုဆိုးကွက်က ဘာကိုပုံဖော်ထားသည်တောင် သေသေချာချာ မသိ ..။ “ခြူးနဒီမှာ ဘာလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ ဆရာက မမမော်ကို ရွေးလိုက်ရတာလဲ ..“ “ခြူးနဒီ .. ဘာပြောတယ် … “ ရဲနိုင် ရင်ထဲ ရီဂျစ်စတာစကေး ရှစ်လောက်ရှိမည့် ငလျှင်တစ်ခု ဖြုန်းခနဲ လှုပ်ခါသည်။ ခြူးနဒီ စကားက ဒီမှာ ရပ်မနေပါ။ ငလျှင်လှုပ်ပြီးလျှင် တွဲပြီးပါလာတတ်သည့် ဆူနာမီလှိုင်းများလို နောက်ထပ် ထပ်ရောက်လာသည်။ “ဆရာ မသိချင်ယောင်မဆောင်ပါနဲ့ .. ဆရာနဲ့ မမမော် ကျိတ်ဖြစ်နေတာကို ခြူးနဒီ သေချာသိထားတယ် ..“ “မ .. မဟုတ်ဘူး .. ခြူးနဒီ .. ဆရာ ရှင်းပြမယ် .. မမမော်နဲ့ ဆရာက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပါ … တခြား ပတ်သက်မှု မရှိပါဘူး ..“ ရဲနိုင် ပြာပြာသလဲ ရှင်းပြရသည် ထုံးစံအတိုင်း ပြောသာပြောလိုက်ရသည် သူ့စကားတွေ အထာမကျ။
အမူအယာကလည်း မှင်သေမှု မရှိ။ ခြူးနဒီက ရဲနိုင် ရှင်းပြသည်ကို အရေးမလုပ်။ ပုခုံးပေါ်တင်နေသည့် ဆံပင်လေးတွေ ဝဲသွားသည်အထိ ခေါင်းကို ဘယ်ညာခါယမ်းလိုက်ပြီး .. “ဟင့် အင်း .. ဆရာတို့ ဘာတွေ ဖြစ်ဖြစ် ခြူးနဒီ ဂရုမစိုက်ဘူး .. သိလဲမသိချင်ဘူး .. ခြူးနဒီ သိချင်တာ ဆရာ ဘာဖြစ်လို့ ခြူးနဒီကိုရော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လို့ သဘောမထားနိုင်တာလဲ .. လုပ် ဖော် ကိုင် ဖက် လေ .. ဟုတ်တယ် မှတ်လား ..“ “ဒါ .. ဒါ ..“ “ဒီမှာ .. ဆရာ ကြည့်စမ်းပါဦး .. ခြူးနဒီမှာ ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုခု ရှိလို့လား …“ ရုတ်ချည်း ထိုင်ရာမှထပြီး ဂါဝန်ကို ခေါင်းပေါ်မှမြှောက်၍ ဆွဲချွတ်လိုက်သည့် ခြူးနဒီကြောင့် ရဲနိုင် ယောင်ယမ်း၍ ဖင်ကိုကြွ နောက်ဆုတ်မိသည်။ ဆက်တီထောင့်စွန်းနှင့် သူ့ကျော ကပ်သွားသည်။ ဒီကောင်မလေး ဇွတ်ကြီးပါလား ..။ မျက်စိထဲသို့ ၀င်းခနဲ ရောက်လာသည့် မြင်ကွင်းကို မကြည့်နှင့်ဟု သူ့ဦးနှောက်က အမိန့်ပေးသည်။ သို့သော် ထိုအမိန့်ပေးချက်ကို သူ့မျက်လုံးတွေက လက်မခံပါ။
၀င်းဝါစိုပြည်သည့် အသားအရည်နှင့် အချိုးအစားကျ လှပဖွံ့ဖြိုးသည့် ခြူးနဒီ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂါအလှက ရဲနိုင်ကို ရှောင်ထွက်မရအောင် ဖမ်းစားထားသည် … ။ “ခြူးနဒီ .. မကောင်းဘူး ထင်တယ် .. ဂါဝန်ကြီး ပြန်ဝတ်လိုက်ပါကွယ် .. ခြူးနဒီက လိမ္မာပါတယ် ..“ “ဟုတ်တယ် .. ခြူးနဒီက လိမ္မာတယ် ဆရာ .. ဆရာလဲ လိမ္မာပါ .. မမမော်နဲ့ ဆရာကိစ္စကို တခြားဘယ်သူမှ မသိအောင် ခြူးနဒီ လျှို့ဝှက်ထားပေးပါမယ့် ….“ ရဲနိုင် ဘာပြောရမှန်း မသိတော့။ ခြူးနဒီ ဆိုသည့် ကောင်မလေးကလဲ တကယ့်ဟာလေး။ အခုအချိန်ထိ ဂါဝန်ကို ပြန်မ၀တ်ပဲ ပကတိကိုယ်လုံးအတိုင်း အလှပြသလို နေနေသည်။ “ဟူး . . ခက်တယ်ကွယ် .. ခြူးနဒီရယ် .. ဆရာက ခြူးနဒီကို ညီမလေး တစ်ယောက်လိုပဲ သဘောထားချင်တာ .. ခြူးနဒီ ပြောသလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မဖြစ်ချင်ဘူး ..“ တဲတဲလေးသာ ကျန်တော့သည် စည်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မကူးခင် နောက်ဆုံးအဖြစ် ရဲနိုင် လေသံပျော့နှင့် ဖြောင့်ဖြပြီး ပြောဖြစ်သေးသည်။
သူလဲ ပုထုဇဉ်ပဲမို့ ခြူးနဒီလို မိန်းမချောလေးတစ်ယောက် မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း အနေအထားနှင့် ရှေ့မှာ ရှိနေသည်တွင် စိတ်မလှုပ်ရှားပဲနှင့်တော့ မနေနိုင်။ မဖြစ်သင့်မှန်း သိနေသည့်တိုင် ကျန်းမာသန်စွမ်းလှသည့် သူ့ပေါင်ကြားရှိ အကောင်က အလိုလို ခေါင်းထောင်ချင်လာသည်။ “ဒါများ ဆရာရယ် .. ညီမဆိုတော့လဲ ညီမပေါ့ .. မွေးစားညီမလေ .. မွေး စား ညီ မ .. ဖြစ်တယ် မှတ်လား .. ခိ .. ခိ “ “ဟူး .. ဖြစ်တယ်ကွာ .. ကဲ ပြော .. ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ..“ “ဘာမှ လုပ်ပေးစရာ မလိုဘူး .. ခြူးနဒီနဲ့သာ အထဲလိုက်ခဲ့တော့ .. လာ ဆရာ .. မြန်မြန်လုပ် .. ခြူးနဒီ အအေးပြန်ပတ်နေဦးမယ် ..“ ရဲနိုင် ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ကွာဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ဆွဲခေါ်သည့် ခြူးနဒီ၏ နောက်ကို လိုက်လာခဲ့သည်။ စစချင်းတော့ ခြေလှမ်းတွေက အနည်းငယ် နှေးနေသေးသည်။ သုံးလေးငါးလှမ်းလောက် လှမ်းပြီးချိန်တွင် နောက်တွန့်နေမှုက ဘယ်ရောက်သွားမှန်းကို မသိတော့။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုက တက်ကြွမှုအဆင့်ကို ကူးပြောင်းသွားသည်မို့။
ခြူးနဒီနှင့် သူ အခန်းထဲသို့ ဘေးချင်းယှဉ်လျက်ပင် ရောက်လာသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ အခန်းထဲတစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသည့် ရဲနိုင် ဟိုဟိုဒီဒီ ငေးကြည့်နေမိသေးသည်။ သို့သော် ခြူးနဒီက သူ့ကို အချိန်သိပ်ပေးမနေ။ အခန်းထောင့်တွင် ရှိသော သူမ၏ အိပ်ယာလေးရှိရာသို့ လက်မောင်းကို ဆွဲ၍ ခေါ်သွားသည်။ ရဲနိုင်ကို ကုတင်ပေါ်တွင် အရင်ထိုင်စေသည်။ သူမကတော့ မထိုင်သေးပဲ လက်တစ်ဖက်က ကိုင်လာသည့် ဂါဝန်ကို ကုတင်ခြေရင်းရှိ တန်းတွင် အရင်လွှားတင်သည်။ “ခြူးနဒီကို ညီမဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်တော့ ခြူးနဒီက ဆရာ့ကို အစ်ကိုဆရာလို့ ခေါ်မယ်နော် .. ကြိုက်တယ်မှတ်လား ..“ “အင်း .. ရတယ် ..“ “ကဲ .. အစ်ကိုဆရာ ဒီမှာ ပက်လက်အိပ်လိုက်တော့ .. အစ်ကိုဆရာ ဘာမှ လုပ်ပေးစရာ မလိုဘူး .. ခြူးနဒီပဲ အစစ လုပ်ပေးသွားမယ် .. ခြူးနဒီ လုပ်ပေးတာ မကြိုက်ရင်သာ ပြော ..“ “အေးပါကွာ ..“ ရဲနိုင်၏ လေသံက ဖျော့တော့တော့ …။
မိန်းမအတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့တာ မဟုတ်သည့်တိုင် အခုလိုမျိုး မိန်းကလေးတစ်ယောက်က စပြီး သူ့ကို ဘယ်လိုနေ၊ ဘယ်လိုထိုင်ဆိုပြီး လိုက်ပြောပြနေတာမျိုးတော့ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးခဲ့။ ကောက်ညင်းက မစေးပဲ ဆန်ကြမ်းက ပြန်စေးသလိုမျိုးဖြစ်ပြီး လက်ဖျားခြေဖျားတွေတောင် အေးစက်နေသည်။ ခြူးနဒီ ခိုင်းသည့်အတိုင်း မွေ့ယာပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် အိပ်ပေးလိုက်သည်။ ခြူးနဒီက သွက်သည်။ ရဲနိုင် ပက်လက်ဖြစ်သွားသည်နှင့် ၀တ်လာသည့် ဂျင်းဘောင်းဘီ ခါးပတ်ခေါင်းကလစ်ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ကိုင်ကာ ဖြုတ်သည်။ ခါးပတ်ကို အကုန်တောင် ဆွဲဖြုတ်မနေပဲ ကလစ်ကွာသွားသည်နှင့် ဘောင်းဘီကြယ်သီးကိုထပ်ဖြုတ်သည်။ ကြယ်သီးပြီးတော့ အောက်က ဇစ်ကို ဆွဲဖွင့်သည်။ ဇယ်ဆက်သလို မြန်လှသည့် သူမ၏ လက်ချောင်းလေးတွေကြောင့် အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်း ရဲနိုင် အောက်ပိုင်းက ဗလာဟင်းလင်း ဖြစ်သွားသည်။ စိတ်ကူးထဲတွင် ပုံဖော်နေရသည့် အတန်ကြီး .. အချောင်းကြီးဆိုတာကို ခြူးနဒီတစ်ယောက် မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်လိုက်ရသည်။
အစ်ကိုဆရာ စိတ်ပါသည်၊ မပါသည်ဆိုတာ ခြူးနဒီ စဉ်းစားနေဖို့ မလိုတော့။ ထောင်မတ်စပြုနေပြီဖြစ်သော အကောင်ကြီးက သက်သေပြနေသည်။ အားရစရာကြီး။ အသည်းယားစရာကောင်းလှအောင် ထွားလှသည့် အတန်ကြီးသည် ပေါင်ကြားတွင် ကြွားကြွားဝင့်ဝင့်ရှိနေသည်မှာ အမြှောက်ကြီးတစ်ခုအလား …။ “အစ်ကိုဆရာ .. အစ်ကိုဆရာက လက်နက်ကြီးတပ်ကပဲ .. ဒါကြောင့်ကိုး ..“ “ဘာ.. ဒါကြောင့်လဲ ခြူးနဒီ ..“ “အို .. ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုဆရာ .. ခြူးနဒီ စုပ်ကြည့်ချင်တယ်နော် .. ရလား ..“ “ရတယ် .. လုပ်ချင်တာသာ လုပ်တော့ ..မေးမနေနဲ့“ “တကယ်နော် … ပြီးတော့မှ နောင်တ မရနဲ့ ..“ “မရဘူး .. မရဘူးကွာ .. တယ်လဲ စကားများတဲ့ ခြူးနဒီပဲ ..“ “အင်းပါ .. စကားမပြောတော့ဘူး .. အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြတော့မယ် .. ရယ်ဒီ .. ၀မ်း တူး သရီး ..“ တိုင်မင်ခေါ်ပြီးသည့်နောက် ရဲနိုင် ခြေရင်းပိုင်းတွင် နေရာယူထားသူ ခြူးနဒီ၏ မျက်နှာက သူ့ပေါင်ကြားသို့ နိမ့်ကျသွားသည်။
ပလွတ်ဆိုသည့် မြည်သံကို မတိုးမကျယ်ကြားလိုက်ရပြီးနောက် နွေးကနဲ ဖြစ်သွားသည့် ထိပ်ဖူးဆီမှ စိမ့်နေအောင် ကောင်းသည့်အရသာကို ရဲနိုင် ခံစားလိုက်ရသည်။ ခပ်လျော့လျော့ ဖြစ်နေသည့် သူ့ခြေတန်တွေ ဆန့်တန်းသွားပြီး ပေါင်ခြံတစ်ဝိုက်ရှိ အကြောတွေ တင်းခနဲ ဖြစ်သည်။ တင်းတင်းလေး ငုံကာထားလို့ ထိတွေ့နေသော နှုတ်ခမ်းပါးလေးများနှင့် လိင်တန်တလျှောက် ပြေးလွှားနေသည့် လျှာဖျားလေး၏ အထိအတွေ့ကြောင့် ရဲနိုင် ခြူးနဒီကို မကြည့်ဖြစ်အောင် စိတ်တင်းထားလို့ မရတော့ပါ။ မျက်နှာကျက်တည့်တည့်ကို စိုက်ကြည်နေရာမှ ခေါင်းကို အနည်းငယ်ထောင်၍ မတ်လိုက်ပြီး ခြူးနဒီနှင့်သူ ဆက်သွယ်နေသည့် နေရာကို လှမ်းကြည့်သည်။ မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ရင်တွေ ဒိန်းခနဲ ခုန်သည်။ အကြည့်ကို ဘယ်လိုမှ ပြန်လွှဲလို့ မရတော့ပဲ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးထဲသို့ သူ့ဟာကြီး တိုးဝင်ပြန်ထွက်ဖြစ်နေမှုကို အသက်ရှူဖို့ မေ့လျော့နေသည့်အလား စိုက်ကြည့်နေမိသည်။
အားရစရာ ကောင်းလှအောင် ပူနွေးမာကြောနေသည့် အချောင်းကြီးကို ခြူးနဒီ အားရပါးရပင် စုပ်သည်။ စုပ်နေရင်းမှလဲ ရဲနိုင်၏ အခြေအနေကို မျက်လွှာလေး ပင့်၍ ကြည့်သေးသည်။ ကျေနပ်အားရအောင် တော်တော်ကြာကြာ စုပ်ပြီးနောက် အာခေါင်ထဲအထိ ၀င်နေသည့် အချောင်းကြီးကို အပြင်ထုတ်လိုက်သည်။ “အစ်ကိုဆရာ .. ခြူးနဒီကိုကော ပြန်လုပ်ပေးပါလား .. အစ်ကိုဆရာ လုပ်တတ်တယ် မှတ်လား .. “ “ဘာ .. ဘာလဲ ..“ “ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာလေ .. ခြူးနဒီ ကိုယ်ကို အဲဒီဘက် လှည့်လိုက်မယ် ..“ “ဟင် .. အဲ .. အဲဒါ .. မလုပ်ဖူးဘူး ..“ “တကယ်လား … အစ်ကိုဆရာ တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူးလား ..“ “တကယ်ဟ .. ဒီကိစ္စ ညာပြောရမှာလား ခြူးနဒီရာ ..“ “ဒါဆို ခြူးနဒီ ပိုကြိုက်သွားပြီ .. မရဘူးကွာ .. လုပ်ပေး .. မလုပ်ပေးလျှင် ..“ ခြူးနဒီက တကယ့် ဂျစ်ဆိုမှ ဂျစ်။ ရဲနိုင် ပြာပြာသလဲ ဖြစ်သွားမှ ပို၍တောင် သဘောကျသွားဟန် ရှိသည်။ ယောက်ျားလေးတွေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် ဖြစ်လျှင် ငါပထမဆုံးကွဆိုသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို လိုချင်သလို .. ။
အခုလဲ သူမမှာ ခြူးနဒီ ပထမဆုံးဆိုသော အခြေအနေကို မက်မောနေလေသည်။ အစ်ကိုဆရာက သူမကို မွေးစားညီမလို့ဆိုတော့ သူမကလဲ ညီမတစ်ယောက်လိုပဲ နွဲ့ဆိုးဆိုးရမည်။ ရဲနိုင် ကန့်ကွက်တာတွေ ဘာတွေကို ထည့်တွက်မနေ .. ။ သူမကိုယ်ကို တကယ်ပင် ခြေရင်းဘက်တွင် ကုန်းထားရာမှ လှည့်ရွှေ့လိုက်သည်။ ဖြောင့်စင်းဝင်းဝါသည့် ပေါင်တန်တွေက ခေါင်းရင်းဘက်ကို ရောက်လာသည်။ ရဲနိုင် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိခင်မှာပင် သိနေသည့် ခြူးနဒီ၏ ခြေတန်သွယ်သွယ်လေးတွေ သူ့ခေါင်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် အကျအန နေရာယူပြီးသား ဖြစ်သည်။ “ဟဲ့ .. ကောင်မလေး .. နင်နော် .. အကြပ်ကိုင်တာတွေ မလုပ်နဲ့ .. “ “ဟီး .. ဟီး .. ဆောတီး .. အကြပ်ကိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုဆရာကလဲ .. ညီမဆိုးလေးမို့ ဂျီကျတယ် လုပ်ပါ .. လုပ်ပေးပါနော် .. ခြူးနဒီက သန့်ပါတယ် .. အမွေးတောင် တစ်ပင်မှ မရှိတာ အစ်ကိုဆရာ တွေ့တယ် မှတ်လား ..“ ရဲနိုင် ဘာပြောရမှန်း မသိလို့ နှုတ်က “အင်း“ ဟုသာထွက်သွားသည်။
မျက်နှာတည့်တည့်တွင် ဝဲနေသည့် အကွဲကြောင်းလေး၏ အောက်ခြေရှိ မဟတဟဖြစ်နေသော အဝလေးကို ကြည့်ကာ သူ့ရင်ထဲ ရှေ့ဆက်ရမည့် အခြေအနေတစ်ခုအတွက် ချီတုံချီချ ဖြစ်နေသည်။ ရဲနိုင်တစ်ယောက် လရောင်ချိုနှင့် ပြတ်သွားပြီးသည့် နောက်ပိုင်း မမမော်၏ သွန်သင်ညွှန်ပြမှုကြောင့် အချစ်၏ သင်ခန်းစာ တော်တော်များများကို သိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခြူးနဒီ တောင်းဆိုသည့် ကိစ္စကို မမမော်က တစ်ခါမှ မတောင်းဆိုဖူး။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ။ မမမော်က သူ့ကို သူမ ပါးစပ်နှင့်သာ လုပ်ပေးသည်။ သူ့ပါးစပ်နှင့် ပြန် မလုပ်ခိုင်း။ ဒီအတွက်ကြောင့် ရဲနိုင်သည် အခုအချိန်ထိ ဘာဂျာကို မှုတ်ကိုမမှုတ်ဘူးသေး။ အခုတော့ ပြောင်လက်ရှင်းသန့်နေသည့် မြောင်းလေး၏အောက်ဘက်ရှိ တလက်လက် ဖြစ်နေသော ရတနာတွင်းလေးက သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်နေသည်။ “အစ်ကိုဆရာကလဲ စိတ်မပါတဲ့ အသံကြီးနဲ့ .. အများကြီး မလုပ်ချင်လဲ တစ်ချက် နှစ်ချက်ပဲ လျက်ကြည့် ..။
အစ်ကိုဆရာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ခြူးနဒီ ဆက်မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူး .. “အေး .. ပြီးရော .. လုပ်ပေးမယ် .. ထပ်ပြောမနေနဲ့တော့ .. ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာ ဆက်လုပ် …“ “ဟုတ် ..“ ခြူးနဒီက ရဲနိုင်၏ စကားကို အတိအကျ လိုက်နာသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ရဲနိုင်လည်း သူမ တောင်းဆိုသည့်စကားကို လိုက်နာဖို့ ပြင်ရသည်။ အရင်ဆုံး တင်ပါးလုံးလုံးလေးနှစ်ဖက်ကို လက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ အိစက်နူးညံ့လှသော အထိအတွေ့က သူ့လက်ဖျားမှ တဆင့် ကိုယ်အတွင်းသို့ စီဆင်းလာသောအခါ ရဲနိုင် အားတက်လာသည်။ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် ဖြစ်နေမှုကို ဘေးဖယ်လိုက်သည်။ မျက်နှာကို အကွဲကြောင်းနှင့် တစ်တန်းတည်းဖြစ်အောင် မော့လိုက်ပြီးနောက် ခြူးနဒီ၏ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို သူ့လက်နှင့်ထိန်းကာ အောက်သို့ ဆွဲယူလိုက်သည်။ အရင်ဆုံး သူ့လျှာဖျားက ပတ္တမြားရောင်တွေ ဖြာထွက်နေသော တွင်းဝလေးဆီသို့ မရဲတရဲနှင့် ရောက်သည်။ သူ့ခြေရင်းကို ခေါင်းပြုထားသူ ခြူးနဒီဆီမှ အုကနဲ အသံကြားလိုက်ရသည်။
သူ့ကောင်ကိုလဲ အားပြင်းပြင်းနှင့်တိုး၍ စုပ်ပေးသည်ကို သတိပြုမိသည်။ စိမ့်၍ကောင်းလွန်းလှသော အရသာက ထိပ်ဖူးကို ရစ်ပတ်ဆွဲနေသော ခြူးနဒီ၏လျှာဖျားလေးမှတဆင့် အဆက်မပြတ် ရရှိနေလေရာ သူ တကိုယ်ကောင်းဆန်လို့ မဖြစ်ဆိုတာကို ရဲနိုင် စဉ်းစားမိသည်။ လုပ်ဖူးသည် မဟုတ်သည့်တိုင် ကြားဖူးနားဝရှိသည့် အချက်များကို နှလုံးသွင်းပြီး သူ၏လျှာကို ခြူးနဒီကဲ့သို့ အသုံးချသည်။ ထိုးသည်။ ဆွသည်။ ပွတ်ဆွဲသည်။ လျှောတိုက်သည်။ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနှင့် လျှာယဉ်လာသည်။ တွင်းဝလေးမှ ထွက်ကျသည့် အရည်တွေကလဲ ရဲနိုင် စိတ်ထဲချိုမြနေသလို ခံစားရသည်။ သူ့အကောင်ကို အင်တိုက်အားတိုက် စုပ်ပေးနေရှာသူ ခြူးနဒီနှင့်အပြိုင် စိမ်ပြေနပြေ လျှာကို အသုံးပြုလိုက်ရာ များမကြာမီ ခြူးနဒီတစ်ယောက် အချစ်၏နောက်ဆက်တွဲ သုခဘုံသို့ သူ့ထက်ဦးအောင် ရောက်သွားရှာသည်။ “ကောင်းလိုက်တာ .. အစ်ကိုဆရာရယ် .. ခြူးနဒီဖြင့် ကိုယ့်အခန်းထဲကိုယ်ရောက်နေတာ မဟုတ်ပဲ ….။
လေထဲမှာပျံဝဲနေတယ်လို့တောင် ထင်သွားတယ် … အစ်ကိုဆရာ မပြီးသေးဘူးနော် .. မာနေတုန်းပဲ .. “ပြီးမလား ဟ .. နောက်ကျောမှ မလုံတာ … စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ .. နင့်အိမ်ကလူတွေ ပြန်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ “ မာတောင်နေသေးသည့် အချောင်းကြီးကို လက်ဖဝါးနုနုလေးနှင့် တယုတယ ဆုပ်ကိုင်ရင်း ခြူးနဒီ ရဲနိုင်ဘက်သို့ သမင်လည်ပြန်လှည့်ကြည့်သည်။ မျက်တောင်ကော့ကော့လေးတွေ၏ အောက်ရှိ မျက်ဝန်းတွေက လဲ့၍တောက်ပြောင်နေသည်။ လက်သည်းကို အရောင်ဖော်၍ ဆိုးထားသော လက်ချောင်းဖောင်းဖောင်းလေးများနှင့် ဆုပ်ကိုင်ထားမိသော ညီတော်မောင်ကို ယမ်းခါပြရင်း .. “အစ်ကိုဆရာကလဲ .. ခြူးနဒီ အိမ်ကလူတွေ အကြောင်း သိပါတယ် .. သူတို့က ရောက်တဲ့နေရာ ကျောက်ချနေတာ .. ဒီအချိန် ပြန်မလာသေးဘူး .. နောက်တစ်နာရီလောက်တော့ အသာလေး ရသေးတယ် ..“ “နောက် တစ်နာရီ .. မ . မဖြစ် ..“ “မဖြစ်ဘူး မလုပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုဆရာကလဲ .. ခြူးနဒီဘာသာ ဆက်လုပ်ပါ့မယ် …..။
အဲဒီမှာ ပက်လက် ငြိမ်ငြိမ်လေးသာနေ ..“ ရဲနိုင်ကို ချစ်စဖွယ် မျက်နှာပေးနှင့် စနောက်ရင်း ခြူးနဒီ တင်ပါးတွေကို ကြွ၍ ရဲနိုင် ပေါင်ရင်းဘက်ရောက်အောင် နေရာရွှေ့သည်။ သူ့ပေါင်ရင်းကို ခွကာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်သည်တွင် စွင့်ကားလုံးဝန်းနေသော တင်အိုးလေးနှစ်လုံးက အသည်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ထားသည့်နှယ် လှလှပပ ရှိနေသည်။ အကျအနနေရာ ယူပြီးသည်နှင့် လိင်တန်၏ထိပ်ကို ခြူးနဒီလက်ကလေးတစ်ဖက်နှင့် အသေအချာ ဆုတ်ကိုင်သည်။ ရတနာတွင်းဝလေးနှင့် ထောက်ပြီး တေ့သည်။ တေ့မိပြီဆိုသည့်နောက် တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကားထားသည့် တင်ပါးလုံလုံးလေးတွေကို အောက်သို့ဖိချသည်။ စံချိန်မှီ အတန်ကြီး၏ ထိပ်က ရုတ်တရက်ဝင်တောင်မ၀င်။ အ၀တွင် တင်းကာခံနေသေးသည်။ ခြူးနဒီ အံကိုတင်းတင်းကြိတ် အောက်နှုတ်ခမ်းကို လိမ်ကာကိုက်ပြီး အားပြင်းပြင်းနှင့် ဆတ်ခနဲ ဖိချလိုက်မှ တင်းကြပ်စွာ အထဲသို့ တိုးဝင်သွားတော့သည်။ “အား … သိပ်ထိတယ် .. အစ်ကိုဆရာ … မိုက်တယ်ကွာ .. မာမာနွေးနွေးကြီး … အင့် ..“ အီစိမ့်အောင် ကောင်းမွန်လှသည့် အရသာကြောင့် ခြူးနဒီတစ်ယောက် တုန်ခိုက်ခိုက် ဖြစ်သွားရှာသည်။
ထိပ်ပိုင်းနှင့်တောင် ဒီလောက်အတွေ့ကောင်းနေလျှင် တစ်ခုလုံး ၀င်လာလျှင် ပိုပြီးတော့ ဖီလင်ရမှာကို သူမသိသည်။ ပြဲလန်သွားသော တွင်းဝထိပ်လေး၌ အောင့်သက်သက်ဖြစ်နေသည့်တိုင် တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဝိုင်းကာ လှည့်ကာနှင့် ကြိုးစားပမ်းစား ဆက်သွင်းသည်။ ပူနွေးနေသည့် အချောင်းကြီး တစ်ခုလုံး အထဲရောက်သွားသည့်အချိန်တွင်မူ အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးစားလိုက်ရမှုကြောင့် ကျော့ရှင်းနေသည့် သူမကိုယ်လေးတွင် ချွေးဥလေးများပင် တွဲလွဲခိုလာရသည်။ အဖျားပျောက်ဖို့ဆိုပြီး အထူးအထွေ ချွေးထုတ်စရာ မလိုတော့။ ထို့နောက်တွင်တော့ ရဲနိုင်၏ ပေါင်လုံးကြီး နှစ်ဖက်ကို အားပြု၍ ခြူးနဒီတစ်ယောက် အပေါ်စီးမှ စိတ်ရှိတိုင်း ထင်တိုင်းကြဲပစ်လိုက်သည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်သွက်သွက်နှင့် ခြေကုန်ပြေးနေသည်များ ဇောင်းမှလွတ်သည့် မြင်းရိုင်းမလေးတစ်ကောင်နှင့်တောင် အလားသဏ္ဍာန် တူနေလေသည်။ မြင့်လိုက်ကြွလိုက်ဖြစ်နေသော တင်အိုးလေးနှစ်ခု၏ အောက်ခြေရှိ တွင်းဝလေး၏ အနားသားများသည် စက္ကန့်နှင့်အမျှ စုကာဝင်သွားလိုက်၊ လိပ်ကာ ပြန်ထွက်လာလိုက်နှင့် ဖြစ်နေရှာလေတော့လေသည် …. ပြီးပါပြီ။